အဝေဖန် ခံနေရတဲ့ “ငါတို့ အားလုံးမြေ” MTV သီချင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချမ်းချမ်း ဒဲ့ရှင်းပြီ – Let Pan Daily
အဝေဖန် ခံနေရတဲ့ “ငါတို့ အားလုံးမြေ” MTV သီချင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချမ်းချမ်း ဒဲ့ရှင်းပြီ
ဒီရက်ပိုင်း…ကျမ ကို စည်းလုးံသင့်ပြီ..မြန်မာပြည်…သီချင်း ကြည့်ပြီး ဘုမသိဘမသိဆဲ နေတာ အသိတရားလေးတေဝင် အောင်ပြောမှရတာ့မယ်ကျမစပြီးဆိုပေးပါဆိုကတည်းက ပါတီဆွဲဆိုမဆိုဘူးပြောထားပြီးသားပါ..ဒီသီချင်းဟာ..ပါတီဆွဲတွေနဲ့ပြည်သူတေစိတ်မများရအောင် ..ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်အမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးမယ့် .သီချင်းမို့ ဆိုပေးလိုက်တာပါ..
ထမင်းစားရင်နားလည်မှာပါ…သီချင်းရိုက်တုန်းကလဲ ကိုယ် ဂီတမာင်နှမတေအားလုးံနဲ့အတူ ဆိုပေးပါဆိုလို့ဆိုပေးတာပဲ…ဘာအနှောင်အဖွဲ့မှမပါလို့ဆိုပေးတာ..ကျန်တဲ့သူတို့ဘာသာ ..စိတ်ကူးနဲ့ ဇာတ်လမ်းတေထပ်ထားတာတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူး….သိလဲမသိဘူးကိုယ့်လိပ်ပြာကိုယ်လုံတယ်…edit လဲကိုယ် မဆက်တော့မသိဘူး…လာဆဲလို့ ကိုယ်တောင် မကြည့်မိလို့ အပြေးအလွှား ကြည့်ရတာ…ငါတို့အားလုံးမြေ” MTV အရင်တုန်းက election တုန်းကလဲ NLD အတွက် ပဲမယ်ဆွယ်ပေးခဲ့တယ်…အခုလဲ NLD ပဲ..အကျိုးအကြာင်းမသိပဲလာဆဲရင်တာ့
..ဆောရီးပဲ..ဆဲတဲ့သူကိုအိမ်အထိပါးတက်ရိုက်မှာ…အေးဆေးနေလိုက်တော့…အခုတခြား ပါတီတေ သီချင်းဆိုဖို့ကမ်းလှမ်းလာတယ်..ကျမကဒဲ့ပဲမေးတတ်လို့ဒဲ့ပဲပြောပါတယ်.
ငါတို့အားလုံးမြေ” MTVကျမအခုလက်ရှိ ဆိုပေးတဲ့ သီချင်းတွေဆိုတာလဲ ဘယ်ဘက်ကိုမှဘက်မလိုက်တဲ့သီချင်းမို့ဆိုပေးတာပါ..ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အသိစိတ်ဓာတ်နဲ့ မဲပေးဖို့ပါပဲ..ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်အားကိုးရမယ့်..နိူင်ငံတကာက လေးစားရတဲ့..ကျမတို့ရဲ့တစ်ဦးတည်းသောခေါင်းဆောင် ..အနှစ်နှစ် အလလ ပြည်သူအတွက် အချိန်ရော မိသားစုရောစတေးခဲ့ရတဲ့ သူ …ကိုယိ့တိုင်းပြည်အတွက် သမိုင်းလှစေမယ့်အလုပ်ကိုပဲလုပ်ကြရအောင်…ကြိုက်သလိုသဘောထားကွဲလွဲနိုင်ပါတယိ…ကျမမိတ်ဆွေ..အသိတွေမှာလဲစစ်တပ်အသိတွေအသိုင်းအဝိုင်းအသိတွေရှိပါတယ်…မိတ်ဆွေအကန့်နဲ့ခင်မင်တာဖြစ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မမုန်းပါ…ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပါတီမဲပေးနိုင်ပါတယ် ကျမကတော့ NLD ပါပဲ..
အဝဖေနျ ခံနရေတဲ့ “ငါတို့ အားလုံးမွေ” MTV သီခငျြး နဲ့ ပတျသကျပွီး ခမျြးခမျြး ဒဲ့ရှငျးပွီ
ဒီရကျပိုငျး…ကမြ ကို စညျးလုးံသငျ့ပွီ..မွနျမာပွညျ…သီခငျြး ကွညျ့ပွီး ဘုမသိဘမသိဆဲ နတော အသိတရားလေးတဝေငျ အောငျပွောမှရတာ့မယျကမြစပွီးဆိုပေးပါဆိုကတညျးက ပါတီဆှဲဆိုမဆိုဘူးပွောထားပွီးသားပါ..ဒီသီခငျြးဟာ..ပါတီဆှဲတှနေဲ့ပွညျသူတစေိတျမမြားရအောငျ ..ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျအမှနျတရားကိုလမျးပွပေးမယျ့ .သီခငျြးမို့ ဆိုပေးလိုကျတာပါ..
ထမငျးစားရငျနားလညျမှာပါ…သီခငျြးရိုကျတုနျးကလဲ ကိုယျ ဂီတမာငျနှမတအေားလုးံနဲ့အတူ ဆိုပေးပါဆိုလို့ဆိုပေးတာပဲ…ဘာအနှောငျအဖှဲ့မှမပါလို့ဆိုပေးတာ..ကနျြတဲ့သူတို့ဘာသာ ..စိတျကူးနဲ့ ဇာတျလမျးတထေပျထားတာတော့ကိုယျနဲ့မဆိုငျဘူး….သိလဲမသိဘူးကိုယျ့လိပျပွာကိုယျလုံတယျ…edit လဲကိုယျ မဆကျတော့မသိဘူး…လာဆဲလို့ ကိုယျတောငျ မကွညျ့မိလို့ အပွေးအလှား ကွညျ့ရတာ…ငါတို့အားလုံးမွေ” MTV အရငျတုနျးက election တုနျးကလဲ NLD အတှကျ ပဲမယျဆှယျပေးခဲ့တယျ…အခုလဲ NLD ပဲ..အကြိုးအကွာငျးမသိပဲလာဆဲရငျတာ့ ..ဆောရီးပဲ..ဆဲတဲ့သူကိုအိမျအထိပါးတကျရိုကျမှာ…အေးဆေးနလေိုကျတော့…အခုတခွား ပါတီတေ သီခငျြးဆိုဖို့ကမျးလှမျးလာတယျ..ကမြကဒဲ့ပဲမေးတတျလို့ဒဲ့ပဲပွောပါတယျ.
ငါတို့အားလုံးမွေ” MTVကမြအခုလကျရှိ ဆိုပေးတဲ့ သီခငျြးတှဆေိုတာလဲ ဘယျဘကျကိုမှဘကျမလိုကျတဲ့သီခငျြးမို့ဆိုပေးတာပါ..ကိုယျတိုငျကိုယျ့အသိစိတျဓာတျနဲ့ မဲပေးဖို့ပါပဲ..ကိုယျ့တိုငျးပွညျအတှကျတကယျအားကိုးရမယျ့..နိူငျငံတကာက လေးစားရတဲ့..ကမြတို့ရဲ့တဈဦးတညျးသောခေါငျးဆောငျ ..အနှဈနှဈ အလလ ပွညျသူအတှကျ အခြိနျရော မိသားစုရောစတေးခဲ့ရတဲ့ သူ …ကိုယိ့တိုငျးပွညျအတှကျ သမိုငျးလှစမေယျ့အလုပျကိုပဲလုပျကွရအောငျ…ကွိုကျသလိုသဘောထားကှဲလှဲနိုငျပါတယိ…ကမြမိတျဆှေ..အသိတှမှောလဲစဈတပျအသိတှအေသိုငျးအဝိုငျးအသိတှရှေိပါတယျ…မိတျဆှအေကနျ့နဲ့ခငျမငျတာဖွဈလို့ ဘယျသူ့ကိုမှ မမုနျးပါ…ကိုယျကွိုကျတဲ့ပါတီမဲပေးနိုငျပါတယျ ကမြကတော့ NLD ပါပဲ..
ဘိုမရုပ်လေးလား ထင်မှတ်သွားရလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြင်အဆင်လေးတွေ နဲ့ နန်းဆုရတီစိုး ရဲ့ပုံလေးများ
ရငျဖိုစရာ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိ အသညျး ယားစရာ ကောငျးနေ တဲ့ မအေးသောငျး ရဲ့ ဗီဒီယို
ရုပျရှငျ မငျးသားကွီး ကြျောသူ ကနျြးမာအောငျ ဆုတောငျးပေးကွပါအုံး …